Kuvhima & Kupfura
Chikamu Chekurapa Chikamu
Kufuridzira Kuderedza Cushion
Nezve KELU TECH
Ziva excellet ductility uye mapurasitiki pane chigadzirwa icho chakafananidzwa kuomarara uye simba. Iva akakodzera akasiyana akasiyana zvikamu.
Kukwanisa kuburitsa zvikamu zvakaoma, zvakaomarara dhizaini iyo inogona kunge isinga zadzikiswe nemamwe matekinoroji. Kushandiswa kwemashoko: kusvika 95% uye pamusoro.
Dhinda Kushivirira: ± 0.02mm Kurema Kushivirira: ± 0.2g Pamusoro Roughness: 1 ~ 1.6um
Mwedzi kugona 1200kg pazuva uye matani makumi matatu pamwedzi, kunyangwe kune chishongedzo chidiki. Kugadzirwa, yakaderera yevashandi mutengo uye yakakwira kupenya pamusoro pechiso.
Tungsten ichiyerera uremu
Tungsten Worm uremu
Tungsten Drop Shot uremu
TUNGSTEN PUNCH ZVEMAHARA
Tungsten Cheburashka kunyura
Tungsten ichirova isina-chip
Tungsten Pagoda uremu
TUNGSTEN BARREL Kurema
Tungsten Bhora Kurema
diamond tungsten kunyura
tsika tungsten uremu
Chipikiri / Pogoda Kurema
Bhora Kudonhedza Sinker
KUMWE CHIDIMA CHINOSVAKA BHUKU
Kuvhima & Archery Ferrule
Gorofu Screw Kurema
Gorofu ZANO kurema
TUNGSTEN TIP KUSVIRA
STEEL ZANO MADZIMA
Shandisa MIM (Metal jekiseni Kuumbwa) maitiro ekugadzira iwo akagadzirwa esimbi zvishongedzo zvakagadzirwa kubva kuTungsten, Brass kana Stainless Simbi iyo inogona kushandiswa kune yakafaranuka muvhimi, chirauro uye kubata kwekubata hove, zvishongedzo zvegorofu, dhiramu redhara, mireza yekupfura uye hove , radiation kudzivirirwa nemidziyo yekurapa, zvikamu zvezvishongo nezvimwewo.
Kugadzira zvakasarudzika kana pamwechete pamwe neMIM maitiro maererano nemaitiro ekudaira, senge museve, ferrule, crossbow michina mikukutu yemiseve yekupfura nemidziyo yekuvhima, nzvimbo yemunda yekupfura nemiseve, dhata adapter yegoridhe zvishongedzo,
Gadzira muforoma neKELU wega mainjiniya timu ine anopfuura gumi gumi expericnce. Yakapetwa muhumwe hwakabatana, kusanganisira jekiseni muforoma uye sizing inofa timu yeKELU ita chokwadi chekururamisa zvirinani uye mutengo wakaderera pane mari yeforoma.
Akanaka Zvido kubva KELU muna 2021 gore idzva
Nhasi izuva rekutanga rekushanda ra2021. Pane ino occation, KELU timu inotora zvatinoshuvira kune vese vatengi vedu. Anofara 2021! Goredzva Rakanaka! Unoshuvira kuti bhizinesi rako ribudirire muna 2021! Ndinoshuva kuti iwe nemhuri yako muve noutano uye mufare muna 2021! Ndinoshuvira kuti hutachiona hurambe huri kure newe nevanhu vese iwe l ...
Tungsten: Mweya wemauto Maindasitiri
Kune indasitiri yemauto, tungsten uye maalloys ayo ari mashoma zviwanikwa zviwanikwa, izvo kusvika pamwero mukuru zvinosimbisa kusimba kwemauto enyika. Kugadzira zvombo zvemazuva ano, hazviparadzane nekugadziriswa kwesimbi. Zvekugadziriswa kwesimbi, mabhizinesi emauto anofanirwa kuve neakanaka k ...
Chii chiri chitsva chekurema hove?
Mumusika weChinese wehove, kukwezva kunonzwika hakukodzerane nechero chiwanikwa metaerials, asi kuNorth America, tungsten yatokura uye inozivikanwa seye alloy lure kwemakore. Tungsten alloy hove dzinodzika dzinowanzo shandiswa misungo mukukwezva nzira dzekuredza. Nzira yekuredza hove yakatanga kubva muEurope ...
Kukosha kwekudzora kwekushisa muMIM
Sezvo isu tichiziva, tembiricha kudzora ndiyo yakakosha kiyi kune ese ekushisa ekugadzirisa, differnet zvinhu zvinoda kurapwa kwakasiyana, uye kunyangwe zvakafanana zvinhu neakasiyana kusiana, inodawo kuchinjiswa pane tembiricha kugadzirisa. Kupisa hakusi chete kiyi yakakosha yekushambadzira pr ...